Serivisy fanontam-pirinty 3D / Teny fanontana 3D eo noho eo / Order 3D Prints - Createproto Tech Co., Ltd.
SERVICE / Fanontana 3D
Serivisy fanontana 3D manara-penitra matihanina haingana, na marina ny fanontana SLA 3D na fanontana maharitra SLS 3D, azonao atao tsara ny mahatsapa ny volavola tsy misy ferana.
Tombontsoa amin'ny fanontana 3D
Ataovy fohy ny fotoana fandefasana: ny ampahany dia matetika alefa ao anatin'ny andro vitsivitsy, hanafainganana ny famerenana ny famolavolana ary ny fotoana hamarotana azy.
Manangana Geometry sarotra - Mamela ny famoronana faritra tsy manam-paharoa miaraka amin'ny geometry sarotra kokoa sy ny antsipiriany mazava tsara nefa tsy mampiakatra ny vidiny.
Ahenao ny vidin'ny famokarana - Mandehana hampihenana ny vidin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanesorana ny filàna fitaovana sy ny fihenan'ny asa.
Inona no atao hoe Prototype fanontana 3D?
Ny 3D Pirinty dia teny midadasika ampiasaina hanoritana ny famokarana aditif, izay misy andiana haitao prototyping haingana izay mitambatra karazana sosona maro hamoronana ampahany.
Ny fanontana haingana ny prototyping 3D dia ny fomba haingana, mora ary mahomby hanodinana ny hevitra lehibe ho vokatra mahomby. Ireo prototypes fanontam-pirinty 3D ireo dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fanamarinana ny volavola fotsiny fa mahita koa olana eo am-piandohan'ny fizotran'ny fampandrosoana sy ny valiny mivantana momba ny famolavolana endrika, manakana ny fiovana lafo vidy rehefa vita tanteraka ny vokatra.
Fa maninona no mifidy Createproto ho an'ny serivisy fanontana 3D?
Createproto dia manam-pahaizana amin'ny sehatry ny famokarana prototyping haingana any Shina, manome serivisy fanontana 3D marobe, ao anatin'izany ny fanontana SLA 3D (Stereolithography), fanontana SLS 3D (Selective Laser Sintering).
Ao amin'ny Createproto dia manana ekipa injeniera feno sy mpitantana tetik'asa izay hiara-miasa aminao izahay hanamarina ireo volavolanao CAD, ny asanao amin'ny vokatra, ny fandeferanao amin'ny lafiny hafa, sns. Amin'ny maha mpanamboatra prototype matihanina anay, dia azonay tsara ny filamatra sy ny vokatra ilaina amin'ny orinasa rehetra. Miezaka izahay mba hihaona amin'ny fotoana voafaritra rehetra hanaterana ny vokatra misy fiantohana kalitao amin'ny mpanjifantsika manerantany amin'ny vidiny mirary.
Inona ny atao hoe SLA 3D?
Ny fanaovana pirinty SLA 3D (Stereolithography) dia mampiasa laser ultraviolet izay misintona ambonin'ilay resina thermoset misy rano hamoronana sosona manify an'arivony mandra-pahatonga ny faritra farany hamorona. Fitaovana isankarazany, famahana vahaolana avo lenta ary famaranana kalitao azo atao amin'ny fanontana SLA 3D.
Ahoana ny fiasan'ny fanontana SLA 3D?
Fanodinana angon-drakitra, ny maodely 3D dia ampidirina ao anaty programa fanapahana rindrambaiko manana, miaraka amin'ireo rafitry ny fanampiana raha ilaina.
Ny rakitra STL avy eo dia alefa hanonta amin'ny milina SLA, miaraka amin'ny tanky feno résin photosensitive ranoka.
Napetraka tao anaty tanky ny lampihazo fananganana. Ny taratra laser UV dia nifantoka tamin'ny alàlan'ny fizahana ny mason-tsivak'ilay fizarana miampita ny rano.
Ny resina ao amin'ny faritra fitiliana dia manamafy haingana mba hamorona singa iray. Raha vantany vao vita ny sosona voalohany dia nampidinina 0.05-0.15mm ny lampihazo miaraka amina resina vaovao manarona ny velaran'ny fananganana.
Ny sosona manaraka dia avy eo, manasitrana ary mampifamatotra ny resina amin'ny sosona etsy ambany. Avereno ity dingana ity mandra-pananganana ilay ampahany.
Inona ny fanontana SLS 3D?
SLS 3D Pirinty natao (Laser Stereo Sinter) dia mampiasa laser mahery optika mahery vaika izay manaparitaka sosona vovoka kely isaky ny sosona mba hamokarana faritra geometrika sarotra sy maharitra. Ny fanontam-pirinty SLS 3D dia manangana ampahany matanjaka miaraka amin'ny fitaovana nilonika feno, mety amin'ny prototypes miasa sy faritra ampiasaina farany.
Ahoana ny fiasan'ny fanontana SLS 3D?
Ny vovoka dia miparitaka amin'ny sosona manify eo an-tampon'ny lampihazo ao anatin'ny efitrano misy endrika.
Rehefa hafanaina eo ambanin'ny maripanan'ny fiakatry ny polymer fotsiny dia misy taratra laser mandinika ny vovoka arakaraka ny volavolan-tsoloky ny sosona ary mampiakatra ny hery. Ny vovoka tsy misy marika dia manohana ny lavaka sy cantilever amin'ilay maodely.
Rehefa vita ny fanasivanana ny sisin'ny hazo fijaliana dia mihena amin'ny iray sosona ny hatevin'ny lampihazo ary ny roulant lay dia manaparitaka sosona vovoka matevina mitovy aminy mba hananganana sisin-kazo vaovao.
Averimberina ny fizotrany mandra-panivànan'ny sosona rehetra hahazoana ilay maodely mivaingana.
Tombontsoa amin'ny fanontana SLA 3D
Ny hatevin'ny sosona ambany ary ny marina kokoa.
Endrika bika sy tsipiriany marina.
Sehatra malefaka sy safidy fanodinana aorian'ny fanodinana.
Safidy fananana isan-karazany.
Fampiharana fanontana SLA 3D
Fizarana mazava ho an'ny prototyping.
Modely maodely ho an'ny famolavolana silika.
Tombontsoa amin'ny fanontana SLS 3D
Thermoplastika ambaratonga injeniera (Nylon, GF Nylon).
Fitaovana mekanika tena tsara sy fifamatorana sosona.
Tsy misy firafitra fanohanana, ahazoana geometry sarotra.
Fanoherana ny maripana, fanoherana simika, fanoherana ny abrasion.
Fampiharana fanontana SLS 3D
Fizarana fitsapana injeniera.
Fizarana famokarana fampiasa farany.
Fantsona sarotra, fikafika, takelaka velona.
Ampitahao ireo fahafaha-manaon'ny SLA sy SLS manaraka ireto hisafidianana ny serivisy fanontana 3D mety
Ny fanontana SLS 3D dia manan-karena fitaovana ary azo vita amin'ny plastika, vy, seramika na vovoka fitaratra misy fahombiazana tsara. Ny milina Createproto dia afaka mamokatra ampahany amin'ny fotsy Nylon-12 PA650, PA 625-MF (Mineraly feno) na PA615-GF (Fenoina vera). Na izany aza, ny fanaovana pirinty SLA 3D dia mety ho polymer photosensitive ihany, ary ny fahombiazany dia tsy tsara toa ny plastika thermoplastic.
Ny sisin'ny prototype ataon'ny fanontana SLS 3D dia malalaka sy marokoroko, raha ny fanontana SLA 3D kosa manome famaritana avo lenta mba hampandeha kokoa ny faritra sy hamaritana ny pitsopitsony.
Ho an'ny fanontana SLA 3D, hatevin'ny rindrina ambany indrindra = 0,02 "(0,5mm); Fandeferana = ± 0,006 "(0.15mm) ka hatramin'ny ± 0,002" (0,05mm).
Ho an'ny fanontana SLS 3D, hatevin'ny rindrina ambany indrindra = 0,04 "(1.0mm); Fandeferana = ± 0,008 "(0.20mm) ka hatramin'ny 0.004" (0.10mm).
Ny fanontana SLA 3D dia afaka manangana vahaolana avo lenta miaraka amin'ny savaivony noho ny savaivony sy ny silaka sosona tsara kokoa hanatsarana ny antsipiriany sy ny marina.
Fampisehoana fanodinana mekanika
Ny fanontana SLS 3D dia mampiasa fitaovana thermoplastic tena izy mba hamokarana faritra misy toetra mekanika tsara. Ny SLS dia voahodina mora kokoa, ary mety ho mora fikosoham-bary, fandavahana ary fanoratana mandritra ny milina fanontana SLA 3D tokony hokarakaraina am-pitandremana sao vaky ilay ampahany.
Fanoherana ny tontolo iainana
Ny fanoherana ny prototypes fanontam-pirinty SLS 3d amin'ny tontolo iainana (mari-pana, hamandoana ary harafesin'ny simika) dia mitovy amin'ny fitaovana thermoplastic; Ireo prototypes fanaovana pirinty SLA 3d dia mora tohin'ny hamandoana sy ny fikaohinan'ny simika, ary amin'ny faritra maherin'ny 38 ℃ dia ho malemy sy malemy izy ireo.
Lakaikin'ny fatorana lakaoly
Ny tanjaky ny famehezana SLS 3D dia tsara kokoa noho ny an'ny fanontana SLA 3D, izay misy pore maro eo ambonin'ny fatorana SLS izay mandray anjara amin'ny fidiran'ny viscose.
Ny fanontana SLA 3D dia mety amin'ny famerenana ny maodely maodely prototype, satria manana faritra malamalama izy, fahamarinan-toerana tsara ary endrika tsara.
Manamboatra sy manampy amin'ny famokarana
Ny fanontana 3D dia fantatra ihany koa amin'ny famokarana additive, izay manangana ampahany amin'ny alàlan'ny sosona fitaovana. Manana tombony betsaka noho ny fizotry ny famokarana nentim-paharazana kanefa manana ny olany izy. Ny machining CNC dia teknika mampihena mahazatra ampiasaina amin'ny famokarana faritra, izay mamorona ampahany amin'ny fanapahana ny banga.
Fitaovana sy fahazoana
Ny fizotry ny fanontam-pirinty 3D dia misy ampahany noforonina isaky ny sosona amin'ny fampiasana akora toy ny resins photopolymer cair (SLA), latsaka ny photopolymer (PolyJet), vovoka plastika na vy (SLS / DMLS), ary filament plastika (FDM). Ka mamokatra fako kely kokoa raha oharina amin'ny fizotran'ny CNC. Ny machining CNC dia tokony hesorina amin'ny sombin-javatra iray manontolo, noho izany dia ambany ny tahan'ny fampiasana ny fitaovana. Ny tombony dia saika ny fitaovana rehetra dia mety ho masinina CNC, ao anatin'izany ny plastika enti-mamokatra sy ny metaly isan-karazany. Midika izany fa ny milina CNC dia mety ho teknika azo iainana indrindra ho an'ny prototypes sy ireo faritra novokarina faobe izay mitaky fampiasa avo sy fampisehoana manokana.
Fahamarinana, fahamendrehana amboniny & fahasarotana géometrika
Ny fanaovana pirinty 3D dia afaka mamorona faritra misy geometrika be pitsiny na dia banga lava aza izay tsy vitan'ny milina CNC, toy ny firavaka, asa-tanana, sns. Ny milina CNC dia manome ny refy lehibe kokoa (± 0.005mm) ary ny famaranana tsara kokoa (Ra 0.1μm). Ny milina fanodinana CNC 5-axis mandroso dia afaka manamboatra milina avo lenta amin'ny faritra sarotra kokoa izay hanampy anao hiatrika ireo fanamby sarotra amin'ny famokarana.
Ny vidiny, ny habetsany ary ny fotoana fanaterany
Ny fanontam-pirinty 3D dia matetika mamokatra ampahany ambany nefa tsy misy fitaovana, ary tsy misy idiran'ny olombelona, ​​hany ka azo atao ny mamadika haingana sy mora. Ny vidin'ny fanamboarana ny fanontana 3D dia mifototra amin'ny habetsaky ny fitaovana, izay midika fa ny ampahany lehibe kokoa na ny habetsany betsaka dia lafo kokoa. Sarotra ny fizotry ny milina CNC, mitaky injeniera efa niofana manokana mialoha ny fandaharam-pizarana ireo masontsivana fanodinana sy ny làlan'ny fanodinana ny ampahany, ary avy eo ny milina mifanaraka amin'ny programa. Ny vidin'ny famokarana dia voalaza ao amin'ny kaonty momba ny asa fanampiny. Na izany aza, ny milina CNC dia afaka mihazakazaka hatrany tsy misy fanaraha-mason'ny olombelona, ​​mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny boky lehibe kokoa.
Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana,